प्रम ओली र देउवा बिच भेटवार्ता आखिर के पाक्दै छ भित्रभित्रै ? – Dullu Khabar
प्रम ओली र देउवा बिच भेटवार्ता आखिर के पाक्दै छ भित्रभित्रै ?
२६ मंसिर २०७७, शुक्रबार १५:०१
प्रम ओली र देउवा फाईल तस्वीर ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सभापति शेबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ ।
शुक्रबार साँझा ६ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुटारमा प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच भेटवार्ता भएको स्रोतले रातोपाटीलाई जानकारी दिएको छ ।
भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट नेकपा संसदीय दलका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र देउवाका तर्फबाट काँग्रेस केन्द्री सदस्य रमेश लेखक सहभागी थिए । स्रोतका अनुसार छलफलमा आइतबारका लागि तय गरिएको संवैैधानिक परिषद्को बैठकको तयारीका लागि ओली र देउवाबीच अनौपचारिक भेटवार्ता भएको हो ।
लामो समयदेखि रिक्त संवैधानिक निकायहरूका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका सन्दर्भमाछलफल गर्न आइतबार बिहान नौ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दैछ।
उनले भने, संंवैधानिक निकायमा सहमतिमै अध्यक्ष र सदस्यका चयन गरौँ । अहिलेसम्म सत्ता र विपक्षी दलबीच सहमतिमै गर्न अध्यास छ । सहमतिमै निर्णय गरौँ । पर्सी नै बैठक राखिआलौँ । पर्सीको बैठक छलफल गरिहालौ भन्ने खालको कुरा भयो ।
त्यसका लागि भोलि शनिबार प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाले आन्तरिक गृहकार्य गर्ने बुझिएको छ । स्रोतले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्दृत गर्दै भन्यो, पर्सी मैले बैठक डाकी हालेँ । अब बैठक बसी हालौँ । सरसल्लाह गरेर सहमतिमै निर्णय गरौँ ।
त्यसको जवाफमा सभापति देउवाले हामी सहमतिमै निर्णय गर्ने कुरामा तयार छौँ । छलफल गरेर निर्णय गरौँ भनेका थिए । पर्सीको बैठकबाट निर्णय हुने सम्भावना भने न्युन छ । स्रोत भन्यो नेकपाभित्रको समस्या कुन रुपले अगाडि बढ्छ निर्णय हुने कुरा त्यसमा भरपर्छ, स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)सँग भने यस विषयमा कुनै छलफल नगरिएको बुझिएको छ । नेकपाको भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले राष्ट्रिय तथा दीर्घकालीन महत्वका निर्णय र नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गर्ने र आवश्यकताअनुसार पार्टीभित्र पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो।
जसले ओलीलाई एकल निर्णय लिन कठिन छ । नेकपाभित्र ओलीलाई प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षसँग शक्तिसन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती छ ।
यस्तै समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र ३ आयुक्त, आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा अध्यक्ष र ४ आयुक्त, मधेसी आयोगमा ४ आयुक्त, थारू आयोगमा ४ आयुक्त र मुस्लिम आयोगमा ४ आयुक्तको नियुक्ति हुन बाँकी छ । जसमा पहिले भएको सहमति अनुसार एकएक पद लिएर जानुपर्ने देउवाको भनाई थियो ।
देउवाले अख्तियार, निर्वाचन आयोगसहितका बाँकी संवैधानिक निकायमा विभिन्न पदहमा सम्मानजनक खोजेको देखिन्छ । देउवाले अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा एक एक आयुक्त मागेका छन् । अरु आयोगका सदस्यमा पनि देउवाले सम्मानजनक हैसियत खोजेको बुझिएको छ । आइतबारको बैठकमा पनि देउवा सोही रुपमा प्रस्तुत हुने बुझिएको छ ।
काँग्रेसले २९ असोजमा ओली सरकार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको बेला ओली र देउवाबीच संवैधानिक आयोगका नामा भएको भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । ओली देउवाको भेटवार्तामा सत्तारुढ नेकपामा देखिएको अन्तरकलहले निम्ताउने सम्भावित पार्टी विभाजन र सत्ता साझेदारीको विषयले चर्चा पाउने गरेको छ ।
यसका पछाडि ओली सरकारमाथि देउवाले देखाएको सदायतले पनि काम गरेको देखिन्छ । प्रमुख विपक्षी काँग्रेसले संकटमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थ अनुसार संसद बैठक नबोलाएको आरोप खेपिरहेको छ ।
असोज २४ गते आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा पार्टी पदाधिकारीसँग देउवाले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन गर्ने र सडक संघर्षका कार्यक्रम पनि सँगै लैजाने विषयमा छलफल गरेका थिए । विशेष अधिवेशनका लागि कांग्रेससँग आवश्यक सांसद संख्या थिएन । अर्को विपक्षी जनता समाजवादी पार्टी त्यसका लागि तयारै देखिएको थियो ।
तर काँग्रेस संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउँदा सत्तारुढ दलभित्रको झगडा साम्य हुनसक्ने भयका कारण अधिवेशन मागको विषयलाई काँग्रेसले थाती राख्यो । उसले नेकपाभित्रको विवाद अझै बढेर पछाडि फर्कन नसक्ने अवस्थामा पुगोस् भन्ने आशयले ‘पर्ख र हेर’ को नीति अख्तियार गरेको छ । पछिल्लो समय ओली र देउवाबीचको भेटका क्रममा नेकपाभित्र दुर्घटना भएमा सम्भावित सत्तासमीकरणका सन्दर्भमा चर्चा हुने गरेको छ । ratopati